Muvhuro, Kukadzi 22, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Matt Chandler
Chero ani anoshanda mumabhizimusi akakura pasina mubvunzo akanyunyuta kakawanda kuti ruoko rwerudyi haruzive zviri kuitwa neruoko rweruboshwe. Munyika yanhasi yekumisikidza pamhepo kune echinyakare midhiya, ichi chiitiko chinotonyanya kuoneka.
Kuchenjerera kune zvakadzama uye kuyerera kwekutaurirana kwakakosha mune chero bhizinesi, hombe kana diki. Kukanganisa kusinganzwisisike kunokonzeresa mukukanganisa kukurukurirana kwekutaurirana kana kudiki kwazvo typographical kukanganisa kunogona kuve nematanho anosvika kure.
Muenzaniso: ZvaDenny maresitorendi. Menyu yavo nyowani yemanheru yakadhindwa uye yakaparadzirwa yekupedzisira kudonha inoratidza CTA kune Join joining paDenny's Facebook uye Twitter mapeji, uye yavo yemakambani webhusaiti. Dambudziko rimwe diki: iyo isiri yeiyo ID ID yakanyorwa.
Maererano ichangopfuura CNET Nhau mushumo, mamenyu akagoverwa kumatunhu anosvika chiuru nemazana mashanu enzvimbo dzaDenny nyika dzese nyora Twitter ID yemurume muTaiwan. VaDenny vanonzi vari kushanda neTwitter kutora ID, iyo yanga isingashandi kwemwedzi inodarika mitanhatu.
Ichi chiitiko chinoratidza kudiwa kwekutaurirana pakati pemaoko edhijitari uye echinyakare ekushambadzira. Ichokwadi, vazhinji vanhu vakagara pasi kuzodya pamwe havazove vachitsvaga kumusoro kwaDenny pa Twitter vakagara patafura. Asi iyi mhando ye snafu mune chero imwe mamiriro angave ane njodzi.
Zvingangodaro zvaiita kunge zvakachengeteka kufunga kuti vaDenny vangadai vakanyoreswa twitter.com/dennys, sezvavari dennys.com. Asi ivo havana, uye iwe unoziva zvavanotaura nezve zvinoitika kana iwe uchifungidzira.
Ko kana iko iko kukanganisa kwakaitwa munzvimbo yeTV kana kudhinda kushambadzira? Kana pane yakananga tsamba kana email kadhi kana tsamba Kushambadzira uye Kutaurirana kunofanirwa kuve kwakanangana, kugara uchisangana neInteractive kuitira kudzivirira rudzi urwu rwekukanganisa kubva mukudzikisira kunyangwe akanakisa ekushambadzira ekushambadzira.
Kudhindisa mamamenyu matsva kungangodaro kusaratidzika kunge kunodaidzira kweinopinda timu Inopindirana. Asi ikozvino kunyangwe echinyakare-chikoro bhizinesi maturusi anoratidzira zvimwe zvemadhijitari, senge ma URL. Maoko maviri ekutaurirana- echinyakare nedhijitari- anofanirwa kuve nechekuita pakurongwa kwechero chirongwa chekuona kubatana kwakabatana.
Matt ndiye Dhijitari Wemukati maneja we Ingersoll Rand Security Technologies, uye ari adjunct murairidzi weWebhu Kushambadzira ku Unyanzvi Institute of Indianapolis. Ane makore anopfuura gumi ane ruzivo rwekugadzira zano uye maneja zvemukati zvemapoka emasangano ebhizinesi kusanganisira Raidious, NYU Langone Medical Center uye Nharaunda Hutano Network. Iye zvakare ane yekuseka vinyl rekodhi yekuunganidza uye pug inonzi George Benson.